Izindaba - Iphakheji yokuphrinta enezinto ezahlukahlukene zokupakisha
Ukuphrinta kwephakheji ngezinto ezahlukahlukene zokupakisha
Iziqukathi noma ukupakisha, nemisebenzi yokuhlobisa impahla. Ukupakisha ukuqhubeka kwenqubo yokukhiqizwa kwempahla kwinqubo yokusakazwa, futhi kuyisimo esibalulekile sezimpahla zokungena emkhakheni wokusakazwa nokusetshenziswa. Indima yokupakisha inezici ezilandelayo: ①Qalisisa inani lezimpahla futhi usebenzise inani, futhi kuyindlela yokwengeza inani lezimpahla; RotVikela impahla ezintweni zemvelo ezifana nelanga, umoya, imvula, nokungcola kothuli. Vimbela ukulahleka okufana nokweqisa, ukuvuza, ukuncibilika, ukungcoliswa, ukushayisana, ukukhama, ukulahlekelwa nokweba; ③ Letha ukulondolozwa, ukuthuthwa, ukulungiswa kanye nokuthengiswa okusakazwayo, njengokulayishwa nokulayishwa, ukufakwa kwempahla, ukuthambisa, ukuhambisa nokwamukela, iTransshipment, ukubalwa kokuthengisa, njll .; Ify nhle imikhiqizo, uhehe amakhasimende, futhi uphromothe ukuthengiswa.
Ukupakisha kusho uchungechunge lwemisebenzi ukuklama nokukhiqiza iziqukathi noma ama-wrappers. Ukupakisha, njengemboni yezinsizakalo esekelayo emnothweni wezwe, kuqhubekile nokukhula nokuthuthuka kanye nokwakhiwa kobusoshiyali baseChina. Ikakhulukazi selokhu kwenziwa izinguquko nokuvulwa, ngaphansi kohlelo lwezomnotho lobusoshiyali, imboni yokupakisha ithuthuke ngokushesha. , Ukuphrinta, imishini yizona zinto eziyinhloko, ezinobuchwepheshe obuthile besimanje kanye nemishini, nohlelo lwesimanje lwezimboni olunebanga eliphelele lezigaba. Imboni yokupakisha yaseChina isichithe iminyaka engaphezu kwengu-20, iqeda ukuthuthukiswa kwamazwe athuthukile kule minyaka engama-40 eyedlule, futhi ngokuyisisekelo iguqula isimo “semikhiqizo yezinga lokuqala, ukupakishwa kwezinga lesibili, namanani entengo esithathu”. Imboni yokupakisha iguqukele embonini ehlakazekile nangemuva kohlelo oluphelele lwezimboni ngemishini ethile yesimanje yobuchwepheshe kanye nokuhlukaniswa okuphelele. Izici eziphawulekayo zokuthuthukiswa komkhakha wokupakisha zanamuhla ukwenziwa kwemakethe yokupakisha, ukuhwebelana kwembulunga yonke kwentuthuko yomkhakha wokupakisha, kanye nokuhlangana okwandayo nokuncika kwentuthuko yomkhakha wokupakisha emazweni ahlukahlukene.
Ukungena enxanxatheleni yezitolo, cishe noma ngubani uyaqonda ukuthi kuyini ukupakisha. Kodwa-ke, uma uke wahlanganyela ekwakhiweni kwamaphakethe, akunakugwenywa ukuthi imikhiqizo yezimpahla evame ukucwebezela, izitayela ezahlukahlukene zokupakisha, kanye "nezeluleko" ezisheshayo azikwazi ukulawula umugqa omkhulu. Yize amazwe ahlukahlukene ebeke amalungiselelo afingqiwe futhi acacile encazelweni yokupakisha, njenge-United States: ukupakisha kuyisenzo sokulungiselela ukuthunyelwa nokuthengiswa kwemikhiqizo. Okwe-United Kingdom: Ukupakisha kuyilungiselelo lobuciko, lesayensi nobuchwepheshe lokuthuthwa nokuthengiswa kwempahla. ICanada ikholelwa ukuthi ukupakisha kuyithuluzi lokuletha imikhiqizo evela kubahlinzeki iye kumakhasimende noma kubathengi ngenkathi igcina imikhiqizo isesimweni esihle. Izwe lami sekuyisikhathi eside lichaza ukupakisha njengegama elijwayelekile lemikhiqizo evikela imikhiqizo ngenkathi isakazwa, yenza kube lula ukugcina nokuhambisa, futhi ikhuthaze ukuthengiswa.